​एसईई सकेका विद्यार्थीलाई टिप्स : कुन विषय रोज्ने, कस्तो कलेज पढ्ने ?
Thursday, 12 Jul, 2018 4:45 PM
२८ असार, काठमाडौं । एसईईको नतिजा आएसँगै विद्यार्थीहरु कुन कलेज पढ्ने र के विषय पढ्ने अन्योलमा छन् । अधिकांश विद्यार्थी र उनका अभिभावक कुन विषय पढ्दा उपयुक्त हुने निर्णय लिन सक्दैनन् । एसईई पछि सही निर्णय लिन नसक्दा विद्यार्थीको भविश्य डामाडोल भएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले विद्यार्थी अनुकुल विषय र विषयअनुकलको सही कलेज रोज्नु चुनौतीपूर्ण पाटो हो । तर, सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श गरे यो कुनै समस्या नै होइन । अभिभावक आफैंले पनि कलेजहरुबारे बिभिन्न तरिकाबाट बुझ्न सक्छन् । आफ्नो सन्तानको भविश्यसँग जोडिएको पाटो भएकाले पढ्ने विषय र कलेज रोज्दा हतारिनु राम्रो होइन । जतिसक्दो धेरै बुझ्नुपर्छ । काठमाडौं र ललितपुरका केही कलेजका सञ्चालक तथा शिक्षकलाई न्यूजसेवाले प्रश्न गरेको छ, एसईई सकेका कस्ता विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने ? कस्तो कलेज पढ्ने ? उनीहरुको जवाफ :
कस्तो विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने, कस्तो कलेज रोज्ने ?
प्राध्यापक, माइलस्टोन कलेज (बालकुमारी, ललितपुर)
कस्तो विषय पढ्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको क्षमतामा निर्भर गर्छ । एसईईमा बिधार्थीले प्राप्त गरेको प्रतिशतको अधारमा भर पर्छ । एसईईमा ए प्लस नतिजा आयो, तर त्यो विधार्थी चाँडै जागिरमा सेटल हुनुछ र पैसा कमाउनु छ भने प्राविधिक शिक्षा रोज्नु उचित हुन्छ । पाँच–छ वर्ष पढेर मात्रै काम गर्ने तथा आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो भने व्यवस्थापन (कमर्श) विषय पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । एक दशकसम्म पैसा कमाउनै पर्ने बाध्यता छैन या पढाई धान्न सक्ने अवस्थाको परिवार छ भने यस्ता विद्यार्थीले साइन्स विषय पढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।
एमडी, ग्राण्ड एकेडेमी (कुमारीपाटी, ललितपुर)
विद्यार्थीले कलेजले दिने गुणस्तरमा पहिलो ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षासँगै व्यवहारिक ज्ञान पनि दिने कलेज गुणस्तरीय हो । विद्यार्थीको मनोभावना र उसको क्षमता मुल्यांकन गरी कलेजले पाठ्यक्रमिक शिक्षाका साथै सो कुरासँग सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान पनि दिन सके उपलब्धीमुलक मानिन्छ । व्यक्तिअनुसार सिकाई दिन सकेन भने पढाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
एसईई सकाएका सम्पूर्ण भाई बहिनीहरुलाई हामीले जीवनको सुन्दर बाटो देखाउनुपर्ने भएकाले किताबी ज्ञानसँगै व्यवहारिक जीवन र जीवन जिउने कलाको विषयमा ज्ञान दिनु पर्छ । त्यसैले कुन कलेज उपयुक्त भन्दा पनि कुन कलेजमा पढ्दा मेरो भविश्य सुनिश्चित हुन्छ र आफ्नो मुल्यांकन हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यहीँ पढ्न मेरो सुझाव छ । शिक्षकहरुसँग खुलेर रमाइरमाई पढ्ने वातावण भएको कलेज छनोट गर्नुहोस् । कलेजको भर्ना गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या तथा कलेजको भौतिक पूर्वाधारका साथै कलेजले अवलम्वन गर्ने शिक्षण बिधी र प्रदान गर्ने वातावरणलाई समेत ध्यान दिई छनोट गर्न आग्रह गर्छु ।
क्याम्पस प्रमुख, रेन्बो ईन्टरनेशनल कलेज (डल्लु, काठमाडौं)
कुन विषय पढ्ने र कस्तो कलेज रोज्ने पाटो बिद्यार्थी र अभिभावकमा भर पर्छ । विद्यार्थीले एसईईपछि के पढ्न चाहको हो मनोभावना बुझ्नु पर्छ । अभिभावकले आफ्नो सन्तालाई कसरी पढाउन चाहेको छ भन्ने कुरा पनि मुख्य हो । विद्यार्थीको चाहनादेखि अभिभावकको आर्थिक अवस्था पढाईसँग जोडिएकै हुन्छ ।
यो निश्चित भएपछि कलेज रोज्ने बेला चाहिँ विद्यार्थी र अभिभावकले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । भर्ना गर्न जाँदा कलेजबारे राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । विगतका वर्षमा थुप्रै कलेजहरुले विद्यार्थीलाई बिभिन्न लोभ देखाई धेरै भर्ना लिए । लोभमा परेर कलेज गएका विद्यार्थीको भविश्य आजसम्म अन्योलमा छ ।
विद्यार्थीले आफ्नो ग्रेडका आधारमा विषय रोज्दा राम्रो हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा एसईई राम्रो गर्न नसकेकाहरुले कक्षा १२मा धेरै राम्रो गरेको उदाहरण पनि छ । विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्याउनुको पछाडि तीन पक्षको हात हुन्छ । पहिलो विद्यार्थी, दोस्रो कलेज र तेस्रो अभिभावक । नेपाल सरकारको नियमअनुसार विज्ञान बिषय पढ्नका लागि बिधार्थीले गणित र विज्ञानमा सी प्लस ल्याउनै पर्छ, त्यस्तै कमर्स पढ्नका लागि विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा डी प्लस ल्याएकै हुनुपर्छ ।
होप कलेज (सातदोबाटो, ललितपुर)
कुन विषय र कलेज रोज्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीमै भर पर्छ । विद्यार्थीले आफूले रोजेको पढ्नु नै राम्रो हो । कसैले कर गर्नु हुँदैन । आफ्नो रोजाईको विषय पढ्न सजिलो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो ल्याउन सक्छ । विद्यार्थीअनुसार रोजाई फरक–फरक हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने कुनै पनि विषय सजिलो या गाह्रो भन्ने छैन । गरिब र जेहनदार विद्यार्थीहरु जसलाई पढ्न मन लागेपनि पैसाको अभावले गर्दा पढ्न पाउँदैनन् । यसका लागिसरकारले सबै कलेजहरुमा १० प्रतिशत शुल्क छुट गर्न निर्देशन दिएको छ । यो सबै कलेजहरुमा लागू छ ।
तपाईंको कलेजका विशेषता के–के हुन् ?
हाम्रो कलेजमा विज्ञान र व्यवस्थापन विषयहरू पढाइ हुन्छन् । त्यस्तै द हिमालअन्तर्गत नैै सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त सिभिल उप–निरीक्षक र सर्वेयर बिषयका पढाइ हुन्छन् । त्यस्तै, टियूको बिबिएस पनि माइलस्टोन कलेजमा पढाइ हुन्छ । यस कलेजको प्रमुख उद्देश्य जिम्मेवार र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नु हो । कोरा किताबी ज्ञानले मात्र विद्यार्थीहरूलाई देशप्रति जिम्मेवार नागरिकमा रूपान्तरण गर्न सहज हुँदैन । तसर्थ यस कलेजका शिक्षक तथा सञ्चालकहरू अतिरिक्त ज्ञानको माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक र जिम्मेवार बनाउन प्रतिबद्ध छन् । यसका लागि बेलाबेलामा देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट गेष्ट लेक्चर दिने, परियोजना गराउने, स्थलगत शैक्षिक भम्रणमा लैजाने, प्रस्तूति गराउने, योगा गराउने, नैतिक प्रवचन सुनाउने, मनोपरामर्श काउन्सिलिङ गर्नेजस्ता अतिरिक्त विधिमार्फत विद्यार्थीहरूलाई युग सुहाउँदो, दक्ष र चेतनशील नागरिक बनाउन कलेज प्रशासन अहोरात्र खटेको छ । यसैको परिणाम स्वरूप यस कलेजका बिद्यार्थीहरूले हरेक वर्ष उत्कृष्ट प्रतिफल हासिल गर्न सफल हुँदै आएका छन् । त्यस्तै, यस कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सफल भएका छन् । हरेक वर्ष एमबिबिएस, बिई कृषि तथा वन विज्ञान, खाद्य प्रविधि जस्ता विविध प्राविधिक विषयमा पनि यस कलेजका विद्यार्थीहरू छनौटमा परिरहेका छन् । त्यस्तै , सीए, बिबिए, बिएचएम, बिटीटीएम, आईटी जस्ता व्यावसायिक विषयमा पनि यस कलेजका विद्यार्थीहरूले अग्रस्थान हासिल गरेका छन् ।
विगत १९ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो गुणस्तरलाई कायम राख्दै उत्कृष्त नतिजा दिन सफल भएको छ । विद्यार्थी केन्द्रित व्यवहारीक शिक्षा प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेको छ । सोही कारण यस कलेजमा प्रयोगात्मक विषयहरु जस्तै कम्प्युटर बिज्ञान, होटल म्यानेजमेन्ट विषयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढी देखिन्छ । बिद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक क्षमताको विकास गरी देश विकासमा उनीहरुको भूमिका के रहन्छ भन्ने दायित्व बोध गराउँछौं । आत्मविश्वासका साथै आफ्नो शिक्षा पूरा गरी भविष्यको बाटो देखाउने काम यस कलेजले गर्दछ । हामी बिभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप जस्तैः हाजिरी—जवाफ, कविता बाचन, खेलकुद प्रतियोगिताका साथै अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छौँ । शिक्षा क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित यस कलेजको सञ्जाल काठमाडौंका साथै नेपालको सुदुरपश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म फैलिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो वर्षौँको अनुभव हासिल गरेको शिक्षक—शिक्षिकाहरुद्वारा अध्यापन गराइन्छ । विज्ञबाट विद्यार्थीहरुलाई कार्यशाला गोष्ठी, अध्ययन अनुसन्धानका साथै उनीहरुको व्यवहारीक ज्ञानलाई अभिबृदिका लागि ईन्टरसिपको व्यवस्था पनि ग्राण्ड कलेजले व्यवस्था गर्छ । व्यवस्थापन, विज्ञान र मानविकी विषयका पढाई हाम्रो कलेजमा हुन्छ ।
निन्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई हामी विशेष प्राथमिकता दिन्छौं । यो कलेजका सबै शिक्षक शिक्षिका अनुभवी भएकाले अध्ययन अध्यापनमा कुनै कमी छैन । प्रत्येक वर्ष राम्रो नतिजा छ । एसईईमा ए प्लस ल्याउन सफल विद्यार्थीलाई मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापनमा मासिक शुल्क लाग्दैन । भर्नामा ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं । ए प्लस ल्याएर विज्ञान बिषय पढ्न चाहने बिद्यार्थीलाई भर्ना शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ र मासिक शुल्कमा पनि केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै कमजोर तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विदाको दिन पनि १ देखि ३ घण्टासम्म अतिरिक्त कक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीजस्ता मेजर विषय पढाई हुने हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीको मनोबल उच्च राख्न समय समयमा हाजरी जवाफ, फुटबल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, भलिबलजस्ता खेल तथा रचनात्मक क्रियाकलाप गराइन्छ । कलेजमा भलिबलका राम्रा खेलाडी भएकाले ईन्टरकलेज गेम हामी जित्न सफल हुँदै आएका छौं ।
स्थापनाको १५ वर्षमा हाम्रो कलेज मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा परेको छ । हाम्रो कलेज मेडिकल कलेज नै हो । यहाँ बरिष्ठ र अनुभवी शिक्षकहरुबाट पढाई हुन्छ । अरु मेडिकल कलेजहरुको भन्दा यहाँको वातावरण पनि राम्रो छ । ल्याब परीक्षणको राम्रो सुविधा छ । हास्टेलको प्रबन्ध पनि अरु कलेजको भन्दा राम्रो छ । कलेज सुविधायुक्त ठाउँमा भएकाले बिधार्थीलाई आउन र घर फर्किन गाह्रो छैन । हाम्रो आफ्नै कलेजको चारवटा बस छन्, त्यसैले विद्यार्थीलाई यातायातमा असुविधा हुँदैन । कलेजमा बिएसई नर्सिङ, बिएल, बिपीएफ गरी तीन विषय पढाई हुन्छ । प्रत्येक बर्ष ९२ प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल छ ।
तपाईंको कलेज विद्यार्थीले किन रोज्ने ?
हाम्रो कलेज सफल हुनुमा भौतिक पूर्वाधारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सुविधाजनक स्थानमा छ । ललितपुर, बालकुमारीमा चक्रपथसँगै जोडिएको हाम्रा कलेज १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन तथा कक्षाकोठाहरु छन् । सार्वजनिक यातायातमा आउने विद्यार्थीलाई पनि सहज छ । कलेजले आफ्नै यातायातको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
आधुनिक उपकरणहरूले सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरणयुक्त होटल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, इन्टरनेट सुविधायुक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला र प्रशस्त सन्दर्भ सामग्री सहितको पुस्तकालयजस्ता भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताले यो कलेज उपयुक्त शैक्षिक स्थल हो । निरन्तर मनोपरामर्श, अनुशासन पालना विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुरण गराउने विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप, कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्थाजस्ता कुराहरूले माइलस्टोन कलेज अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएको छ ।
सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्व तथा विज्ञ अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा सञ्चालित यस कलेजमा सबै विषयका पूर्णकालीन शिक्षकहरू छन् । प्रायः संस्थापक शिक्षकहरूले मित्रवत् व्यवहारमा विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित बनाइ पढाइमा प्रवृत्त गराउन तल्लीन छन् । आधुनिक सञ्चारका साधन, समयानुकूलको अध्यापन विधिको प्रयोग गरी यस कलेजले आफूलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिरहेको छ । हिमाल कम्पनि अन्तर्गत नै बिएचएम र बिबिए पढाइ हुन देशकै उत्कृष्ट कलेज ‘रिड्ज’ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कलेज पनि बालकुमारीमै माइलस्टोन कलेजसँगै सञ्चालित छ । निकट भविष्यमै बिई, एमबिए बिएससीएजीजस्ता विषयहरू पनि सञ्चालनका लागि कलेज तयारी अवस्थामा छ । हाम्रा यी विशेषताकै कारण विद्यार्थीको रोजाईमा परेको छ ।
हाम्रो कलेज विगतमा उत्कृष्ट नतिजा हाँसिल गर्न सफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो लामो अनुभव हासिल गरेका पेशागत व्यक्तित्वहरुको समुहद्वारा सञ्चालित भएकाले पनि हामी विगतको अनुभवमा भविश्य सोच्दै अगाडि बढेका छौं । विद्यार्थीभित्र लुकेको क्षमता दर्शाई उनीहरुलाई भविष्यमा म केही गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सृजना गर्न हामी कटिबद्ध छौं । ललितपुर तथा काठमाडौंबाट सहज यातायातको सुविद्य, प्रत्येक संकायमा निश्चित कोटा निर्धारण भएको र एथेस्ट भौतिक पूर्वाधारले युक्त भएकाले विद्यार्थीको रोजाइमा परेको छ ग्राण्ड एकेडेमी । विभिन्न किसिमका वर्कसप, सेमीनार, परामर्श सत्र सहितको शिक्षण विधीका आधारमा शिक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।
निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षामा अगाडि बढाउने लक्ष्य हाम्रो छ । धन हुनेले मात्रै पढ्न पाउने परिपाटी अन्त गर्न हामी सामान्य विद्यार्थी पनि राम्रो शिक्षाको पहुँचमा पुग्ने बाटो खोल्दैछौं । त्यसैले निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौं । बिभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिरहका छौं । गरिब र दलित छात्रछात्रालाई भर्ना र मासिक शुल्कमा छुट दिने गरेका छौं । भर्नाका बेला हुने परीक्षामा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई ३ देखि ६ महिनासम्मको मासिक शुल्क छुट गरिन्छ । कलेजको आफ्नो निजी यातायातको साधन नभएपनि मुख्यबाटोमै कलेज भएकाले यातायातको समस्या छैन ।
हाम्रो कलेज किस्ट मेडिकल र एपीएफजस्ता ठूला अस्पतालसँग सम्बन्धित भएकाले विद्यार्थीलाई प्राक्टिकल गर्न गाह्रो छैन । यहाँ अनुभवी शिक्षकद्वारा पठनपाठन गराइन्छ । रिसर्चको मामलामा हाम्रो कलेज सबैभन्दा अगाडि छ । त्यसकारण मेडिकल पढ्ने बिद्यार्थीका लागि होप कलेज नै रोज्ने गरेका छन् ।
प्रस्तुती : अजय शाह